အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာပြ မြေပုံများ - BOSAI | NHK WORLD-JAPAN On Demand
ထုတ်လွှင့်သည့်ရက် ဇွန်လ 30, 2021 ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်မည့် နောက်ဆုံးရက် ဇွန်လ 30, 2022
ဂျပန်နိုင်ငံဟာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေ မကြာခဏဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ သိပ်မရှိတဲ့ နိုင်ငံခြားသားအများစုဟာ ဂျပန်နိုင်ငံကို လာတဲ့အခါ ကိုယ်နေထိုင်တဲ့နေရာတွေမှာ ဒါမှမဟုတ် ခရီးသွားတဲ့ နေရာတွေမှာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေ ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကို သိပါသလား? အရေးပေါ်အခြေအနေမှာ ဘယ်နေရာကို ဘယ်လို တိမ်းရှောင်ရမလဲ? ဒီအစီအစဉ်ကနေ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေ ကျရောက်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့ ညွှန်ပြထားတဲ့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာပြ မြေပုံတွေအကြောင်း တင်ဆက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့က ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ အစီအစဉ် ဖြစ်ပါတယ်။)
ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ မြို့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အများစုက အန္တရာယ်ရှိတဲ့ နေရာပြ မြေပုံတွေကို အင်္ဂလိပ်၊ တရုတ်နဲ့ တခြားဘာသာစကားတွေနဲ့ ထုတ်ဝေ ဖြန့်ချီပေးထားပါတယ်။
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ မစ္စတာ Hori Itaru (ဘယ်)၊ စပိန်ကနေ ဂျပန်ကို ရောက်တာ ၃ နှစ်ကြာပြီဖြစ်တဲ့ မီးစ် Mandy (ညာ)
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၃၀၀ ဝန်းကျင်က ဖူဂျီတောင် မီးတောင်ပေါက်ကွဲချိန်မှာ ပြာတွေ လွင့်ထွက်လာတာကို မှတ်တမ်းတင် ပြသထားတဲ့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာပြ မြေပုံက ဒီကနေ့ခေတ် ဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး ဆောင်ရွက်ချက်တွေအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ပေးပါတယ်။
မစ္စတာ Itaru နဲ့ မီးစ် Mandy တို့ဟာ ရပ်ကွက်ရုံးက ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ရေကြီးမှုအန္တရာယ်ပြမြေပုံကို ကြည့်ပြီး တိုကျိုရဲ့ Edogawa ရပ်ကွက်တစ်ဝိုက် လျှောက်သွားကြပါတယ်။ သမိုင်းကြောင်းအရ ဒီဧရိယာဟာ ရေကြီးမှုဒဏ်ကို အကြိမ်ကြိမ်ခံစားခဲ့ရတဲ့ နေရာ ဖြစ်ပါတယ်။